राजा दिपेन्द्रको प्रेमकथामा दिपेन्द्र सरकार ( भिडीयो )FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
राजा दिपेन्द्रको प्रेमकथामा दिपेन्द्र सरकार ( भिडीयो )
स्व. पूर्वराजा दिपेन्द्र वीरविक्रम शाहको प्रेमकथामा आधारीत नेपाली चलचित्र दिपेन्द्र सरकार निर्माण हुने भएको छ ।
स्व. दिपेन्द्रको जीवनी र प्रेम कथा माथी आशुसेन फिल्मस्ले दिपेन्द्र सरकार निर्माण गर्न लागिएको हो । बुधवार राजधानीमा एक कार्यक्रमको बिचमा चलचित्रको वारेमा सो जानकारी दिईएको हो । नाम मात्र घोषणा गरिएको चलचित्रमा मूख्य कलाकार अर्थात दिपेन्द्र सरकारको भुमिकामा नायक प्रदिप खड्का बाहेक अन्य कुनै कलाकार तथा प्राविधिकहरु घोषणा गरिएको छैन ।
देवयानी राणासँगको प्रेमसम्वन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न नसकेकै कारण दिपेन्द्रले दरबार हत्याकाण्ड मच्चाएको दरबार निकट सूत्रहरुले दाबी गर्ने गरेका छन् । दरबार हत्याकाण्डपछि अर्द्धमृत अवस्थामै दिपेन्द्र नेपालको १३ औं राजा बनाइएका थिए । उनको २१ जेठ, २०५८ सालमा २९ वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको थियो ।
राप्रपाका नेता पशुपति शम्शेर राणाकी छोरी देवयानीसँग दिपेन्द्रको लामो प्रेमसम्बन्ध रहेको थियो । तर, उनकी आमा पूर्वरानी ऐश्वर्या राज्यलक्ष्मी शाह यो प्रेमविरुद्ध थिइन् । यही विषयमा आमासँग भएको मनमुटावले ठूलो रुप लिँदा दिपेन्द्रले आफ्नो वंश नाश गर्न पुगेको बताइन्छ ।
राजदरबारका पूर्वसचिव विवेकुमार शाहले लेखेको किताब ‘मैले देखेको दरबार’ मा आधारित रहेर फिल्म ‘दिपेन्द्र सरकार’ निर्माण गरिने भएको हो । निर्माता सन्तोष सेनले यो चलचित्रको बजेट ५ करोड ५० लाख रहने बताए । फिल्मका लागि ‘मैले देखेको दरबार’ को प्रतिलिपि अधिकार किनिसकेको उनले जानकारी दिए । यो चलचित्रको प्रदर्शन मिति वि।सं २०७५ को जेठ १९ गतेलाई तोकिएको छ, जुन दिन राजदरबार हत्याकाण्ड भएको थियो ।